समाचार - कसरी चिया टिन बाकस चलाखीपूर्वक सफा र राख्ने
चिया टिन बक्सलाई चलाखीपूर्वक कसरी सफा र सम्भार गर्ने
मानिसहरू अक्सर भन्छन्: "ढोका खोल्न सातवटा चीज, दाउरा, चामल, तेल, नुन, सस र सिरका चिया।" यसले देखाउँदछ कि चिया जीवनको सबै क्षेत्रहरूमा प्रवेश गरेको छ। चिनियाँ मानिस चिया पिउन मन पराउँछन्, त्यसोभए के तपाई सबैलाई चिया प्याकेजि boxes बक्सको मर्मत सम्भारको बारेमा थाहा छ?
१. चिन टिन बक्समा तेल दागहरू मार्फत सम्पर्कबाट बच्न कोसिस गर्नुहोस्। यदि तपाईंले गल्तिले केहि फोहोर पाउनुभयो जुन हटाउन गाह्रो छ, हार्ड वस्तुको साथ यसलाई स्क्र्याप नगर्नुहोस्। तपाईं फोहोरमा सिगरेटको खरानी राख्न सक्नुहुन्छ र दागहरू हटाउन कपासको कपडाले यसलाई सफा गर्न सक्नुहुन्छ। स्थानीय दागहरू यसलाई शुद्ध सूती कपडाले सफा गरी पेस्लि pol पेस्टमा डुबाउन सकिन्छ।
२ म्याट सतहको साथ चिया टिन बक्स न्यानो साबुन पानीले सफा गर्न सकिन्छ; जबकि चिया टिन बक्स चिल्लो सतहको साथ उच्च गुणवत्ताको चाँदीको धुने पानीले पखाल्न सकिन्छ लामो समयसम्म चम्किएको उज्ज्वल चमकलाई कायम राख्न।
Food. रातो चिया टिन बक्समा खाना वा पेय पदार्थ नराख्नुहोस्। चिया टिन बक्स सफा गरिसकेपछि, यसलाई राम्ररी पखाल्नुहोस् र समयमै सुकाउनुहोस्, किनकि बाँकी डिटर्जन्ट र पानीको थोपाले चिया टिन बक्सको सतहमा क्षति पुर्‍याउँछ।
The) चिया टिन बक्सलाई आगोको साथ सम्पर्क गर्न वा यसलाई तातो क्षेत्रमा राख्नुहोस्। जब चिया टिन बक्स १ 160० डिग्री सेल्सियस भन्दा बढि तताईन्छ, यसको बनावट भंगुर हुन्छ र भाँडा पाउडर वा थालमा पील हुन्छ। त्यसकारण, चिया टिन बक्स निर्माताले तपाईंलाई चियाको उपचार गर्न सुझाव दिन्छ कि क्षतिबाट जोगिन १ 160० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि फलामको बक्स शिल्प न्यानो पार्नुहोस्।
वास्तवमा, चिया टिन बाकस सफा र मर्मत गर्न गाह्रो छैन, र यो सरल छ भनेर भन्न सजिलो छैन। यो मुख्यतया तपाईं कसरी चिया टिन बक्स सफा र राख्नुहुन्छ त्यसमा निर्भर गर्दछ।
घण्टी पुल ओपनर पंजा हुन सक्छ, सीडी भण्डारण केस, निजीकृत टिन बक्स, टिन बक्स, टिन बक्स प्याकेजि।, ढक्कनको साथ धातु भण्डारण टोकरी,